Tirada ka Qaxaysa Colaadaha Suuriya oo korortay – Radio Daljir
Tirada ka Qaxaysa Colaadaha Suuriya oo korortay
Febraayo 6, 2016 6:01 b 0
Sabti, Feberaayo 06, 2016 (Daljir) —Ra’iisul Wasaaraha Dalka Turkiga, Ahmet Davutoglu ayaa sheegay in 15,000 oo qoxooti Suuriyaan ah ay isugu tageen xuduudda waddankiisa uu la wadaago Suuriya, kuwaasoo kasoo qaxaya duqeynta dowladdu waddo dalkaas.
Qoxootiga kasoo cararay Suuriya ayaan weli loo ogolaan inay xuduudda ka gudbaan dalka Turkiga, laakiinse Shaqaalaha Gargaarka ee Turkiga, ayaa waxay u gudbeen dhanka Dalka Suuriya si ay u caawiyaan kumannaankan Qoxootiga ah.
Sidoo kale, Dadkan waxay kasoo qaxayaan duqeynta ciidanka Suuriya oo garab ka helaya Diyaaradaha dagaalka dalka Ruushka, kuwaasoo kusii siqaya waqooyiga magaalada Xalab.
Ahmet Davutoglu ayaa sheegay in la filayo in tirada Qoxootigaan dalkooda kasoo cararaya ay kororto, isagoo xusay inay ka go’an tahay inay taageeraan cid walba oo ay nabad-galyo darro ku qabsato dalkooda.
Ururka NATO ayaa waxay Ruushka ku eedeysay inuu wiiqayo dadaallada nabadeed ee ka socda dalka Suuriya oo ay weli duqeynta kusii wado, kuwaasoo ay ku sheegeen in kooxaha Mucaaradka ah ee dalkaas lala eeganayo.
Ugu dambeyn, shir jaraa’id oo magaalada Washington uu ku qabtay, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka, John Kerry wuxuu waddanka Ruushka ku eedeeyay inay sii wadaan duqeymaha ku wajahan shacabka dalka Suuriya.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo 30-kii bishii September ee Sannadkii hore 2015-kii duqeymo ka waday Suuriya ayaa weli ku Adkeysanaya inay Duqeymahan sii wadi doonaan, illaa ay ka burburiyaan kooxaha Mucaaradka ah oo ay ISIS ku jirto isla markaana ay Xukuumadda awoodda dalka oo dhan la wareegayso.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Maan-Hadal oo Ku Saabsan Jidka Ceel-Daahir ,Ceer-Gaabo